‘Haddii Barca Guulaysato sababtu waa Garsoorka, Haddii aanu guuldaraysanona sheeko way xidhan tahay’ – Alves Oo Raadinaya Sabab !
HomeHoryaallada‘Haddii Barca Guulaysato sababtu waa Garsoorka, Haddii aanu guuldaraysanona sheeko way xidhan tahay’ – Alves Oo Raadinaya Sabab !
Dani Alves ayaa is weydiinaya sababta kooxdiisa Barcelona guusheeda dusha looga saaro eex garsoorayaashu u sameeyeen , halka marka ay guuldaraystaana aan laba soo hadal qaadin.
Kooxda Catalan-ka ayaa weji gabax kala kulmaysay ciyaarihii horyaalka ee bilihii aynu soo dhaafnay dhexdoodii, markaas oo hogaanka laga soo tuurey isla markaana loo maleeyeyba in xili ciyaareedkan ay u dhamaatay kooxdii Barca, laakiin dib uga soo kabatay oo rajadeedii kor u soo kacday kadib guulihii qaaliga u ahaa ee ay ka gaadheen kulankii Real Madrid iyo midkii kooxda kale ee xafiiltanka deegaan ka dhexeeyo ee Espanyol.
Si Kastoo ay tahayna, labadaas guulood ee ay kooxdu soo hoysay ayaa si loogu xidhiidhiyey khaladaad ka yimid xaga garsoorka kuwaas oo aad loogu eedeeyey inay u xagliyeen dhinaca kooxda uu tababaro Gerardo Martino.
“Eedaymaha garsoorku waa kuwo dhiiri gallin noo ah,” ayaa warbaahinta ku yidhi difaacyahan Dani Alves. “Dhaleecaymaha noocan ahi waa hagoogta lagu qariyo guulahayaga . Waxay u muuqataa inay noloshayada kamid noqotay.
“Haddii aanu guul gaadhno waxa loo nisbeeyaa garsoorka, haddii aanu guuldaraysanana hadal hayntaasi way dhamaataa oo cidiba ma soo qaado. Anaguna waxaanu nahay kuwo ka sareeya arimahaas, saamayna nagu yeelan mayso. Muranku waa waxay doonayaan.
“Wixii ka dambeeyey kulankii El Clasico, Saxaafadu waxay faaqidaysay rigoodhayaashayadii, halkay ka aamusnaayeen ee aanay soo qaadaynin rigoodhihii Madrid, kii kali ahaa ee aan midka ahayn.”
Taageerihii Muuska Ku Soo Tuuray Alves Oo Villareal Ciqaab Adag Marisay